Indlela yokuphatha i-myopia ngezindlela zomuntu?
I-Myopia ingaphathwa emakhaya. Ngokuqhubekayo kusukela kulesi sihloko uzofunda ukuthi ungaphatha kanjani i-myopia ngezindlela zomuntu, wazi kangcono izivivinyo zalabo ababhekene nalesi sifo.
Phatha i-myopia, ngokungavamile, kunconywa:
ngosizo lwama-laxatives esimweni sokuqothulwa, okuhlanganisa amakhambi akhethekile,
wehlela ekhaleni ngubanda futhi kubanda,
ukugeza izixazululo zamehlo,
ukufunda ngekhandlela elikhanyisiwe,
Indlela yokugcina isebenza emva kwenqubo yangaphambilini yokugxilonga emagameni e-anti-inflammatory elungiselelwe ngokusebenzisa uju kanye namakhambi.
Indlela ethile yokudla okunomsoco yabuye yasungulwa ngqo kubantu abanesimo esiseduze. Ngokusho kwalokhu kudla, udinga ukuthatha izinhlanzi ezinkulu, omuncu, okubabayo, okhanda, amazambane, ukudla okubangela ukuqothulwa, ukwakhiwa kwegesi kanye nokuvinjwa kwempumu. Uma, nge-myopia, kukhona ukuqoqwa okukhulu kwegesi esiswini, kutuswa ukuba udle ibhotela elicibilikile nobisi. Ngaphezu kwakho konke lokhu, ngombono obuseduze ebusuku, kunconywa kakhulu ukuthi ungahlali esimweni sokuqapha, okungukuthi, kufanele ulale ebusuku.
Ukwelashwa kwezindlela zesifo abantu.
1. Okokuqala udinga ukujwayela amehlo akho esimweni esilaphukile futhi ubala kaningi. Ungakwazi ukugcina amehlo akho ivaliwe, kodwa, ngaphandle kokuklebhula, ngoba kulokhu iso liyoba elingenangqondo futhi elimazayo ukucindezeleka.
2. Ukuze uthole ukwelashwa, kubalulekile ukwenza ukulungiswa kombono embonini yokuhlola kanye naku-Om-khadi. Ukulungiswa kufanele kwenziwe enkundleni yamamitha angu-30 kuya ku-150.
3. Umbhalo, obhalwe ngokuphrinta okuncane, kufanele ufunde ngokukhanya okuphansi noma ngekhandlela elikhanyisiwe. Amehlo ngalolu hlelo azothola ukuhlukunyezwa endaweni eseduzane, okuyinto eyenza i-hypermetropia, ngakho-ke, endaweni eseduze, ukunyamalala kwe-myopia. Ukuzivocavoca akufanele kube ngaphezu kwemizuzu engu-15. Uma isikhathi esincane sokusebenzisa le ndlela yokwelapha i-myopia, ngokuqinisekile ngeke kube nokwanda kombono wemibono ende.
4. Uma ubheka izinto ezikude, kufanele uzame ukungaboni amehlo akho futhi ikakhulukazi ungagcini.
5. Uma uhamba emgwaqweni kufanele ubheke izinto ezihambayo, isibonelo, kubantu, ezimotweni. Kuyasiza kakhulu ukushayela imoto, njengoba konke kuhambahamba.
Itafula lokuhlola isici.
Ngaphandle kwezindlela ezichazwe ngenhla zokwelapha i-myopia, kunezindlela ezithile zokusebenzisa i-table yokufaniswa yokuhlola kuyasiza. Ungakwenza ngokwakho.
Dala ithebula lokuqinisekisa uhlamvu.
Etafuleni kuzothatha izingodo eziningana, ezingeke zibe nesihawu sokusika, kanye neshidi lika-Whatman, elide lemitha elide. Phezulu kwephepha, udinga ukunamathisela isihloko esinqunyiwe somagazini esivela kulesi sihloko. Ngemuva kwalokho, ngemuva kokuthi uphinde uthathe ama-2, 5 amasentimitha, udinga ukunamathisela igama noma amagama amaningana, ubukhulu buncane kunesihloko. Bese uphinde uphinde uphinde unamathele igama noma ibinzana ngisho nasetheni elincane. Ngakho qhubeka kuze usayizi wegama noma ibinzana lilingane no-1 cm. Kuphelele kufanele kube nemigqa engu-25 ephepheni. Kubalulekile ukuthi ubude bomugqa bunjalo, futhi inani lamagama emgqeni ngamunye landa ngokunciphisa kancane kancane usayizi wefonti. Umbala wazo wonke umbhalo etafuleni kufanele ube mnyama. Ngemuva kokuqeda umsebenzi ekwenzeni itafula elikhulu, udinga ukuphrinta ncamashi ithebula lokuhlola elifanayo kushidi ku-A4 ifomathi. Uhlu lwesibili lokuhlola kufanele luqukathe amagama afanayo kanye nomyalelo ofanayo nephepha. I-Whatman ilenga eludongeni ngokukhanyisa okuhle.
Ukwelashwa kwe-myopia ngetafula lokuhlola.
Ukuzivocavoca inombolo 1.
Ukuzikhandla kokulungiswa kombono ophakathi. Ukwenza umsebenzi owudingayo ukuze uhlale phambi kwetafula, kude no-90 cm. Okokuqala udinga ukucindezela umbono wakho lapho ufunda amakhasi amathathu encwadini ngaphansi kokukhanya okuphansi. Ngemuva kwalokho, zama ukugxila etafuleni. Ukuzivocavoca kufaka ekushintsheni ukufunda le ncwadi futhi ugxile umbono ekubhekeni.
Ukuzivocavoca inombolo 2.
Ukuhambisa ithebula eliphrintiwe (lesibili) ukuya ebangeni elikude kakhulu emehlweni, kodwa ngendlela yokuthi kungenzeka ukuthi ufunde okulotshiwe. Okokuqala, funda umugqa ophezulu, khona-ke, kodwa ubude besikhathi. Phinda kathathu. Bese ubheka masinyane umugqa ophezulu ephepheni, kufanele uqonde. Okulandelayo, vala amehlo akho, phuma ngokujulile futhi wenze izinyathelo ezimbalwa zijika ngekhanda lakho. Manje funda umugqa wesibili kuthebula eliphrintiwe kusuka ebangeni elincane, bese uvela kude nendawo eseluliwe, bese usuka ephepheni. Ungakhohlwa emva kwemigqa embalwa imizuzwana yokuphumula, kufanele uhambe kumgca wokugcina. Uma uzizwa ungathandeki kahle, lokho kungcono ukuyeka.
Ukuzivocavoca inombolo 3.
Ukuvivinya kwesithathu kuyaqhubeka kwesibili, uma ungakwazi ukuwuqedela. Into esemqoka ukwenza umsebenzi ngamunye ngokucophelela, uma ukuhlaziya kungagcinwa, ngakho-ke akudingekile ukushintshela kufonta encane, kodwa kungcono ukuyiphinda nge-line efanayo izikhathi eziningana. Uma usuqedile ukuvivinya umzimba wonke futhi ungafunda konke okulotshwe ephepheni elikude ngamamitha angu-90, bese uthatha enye ingxenye yemitha ukusuka kulo futhi uphinde usebenzise wonke umsebenzi kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni.
Ngokuvamile, ukuze uphathe imyopia ngezindlela ezichazwe ngenhla, imizamo ekhethekile nolwazi akudingeki. Into esemqoka ukukhombisa ukubekezela ekuzivocavoca ngetafula, kancane kancane ukwandisa ibanga, futhi usebenzise ukukhanya okuncane kwamehlo.
Ukwehluleka kokungena emphakathini kukhula kanjani, futhi yiziphi izinkinga eziholela kuzo?
Umuntu kufanele alale malini?
Isitshalo sokwelapha se-buckthorn
I-Sciatica Nerve Inflammation
Izinhlanzi zezinhlanzi ngelayisi
Ingabe umka-Igor Nikolaev ukhulelwe?
Usuku Lothisha - ukuhalalisela othisha abavela ezinganeni, abazali kanye nabo osebenza nabo emlandweni, izinkondlo nezithombe
Ungadliwa of cuisine Japanese
Isokhethi "esingunaphakade": ukushaja ibhethri yangaphandle I-PRO encane
Umhla wosuku lomntwana osanda kuzalwa
Kulabo abancane abashaya abesifazane abahle
Indlela yokukhetha nokugqoka i-beanie hat: thola imithetho emithathu ebalulekile yama-stylists!
Izinhlobo ezingezona zendabuko zokusikhipha
Isitayela seDwala izingubo
Indlela yokuthola ngokushesha umlingani womphefumulo